केनेडियन चुनावमा कसले रोज्न सक्छ?
क्यानाडाका प्रान्तहरूमा मतदान नियमहरू थोरै भिन्न हुन्छन्
संयुक्त राज्यमा सरकारको प्रणाली जस्तै धेरै, क्यानाडामा तीनवटा स्तरहरू सरकार छन्: फेडरल, प्रांतीय वा क्षेत्रीय, र स्थानीय। क्यानाडा एक संसदीय प्रणाली भएकोले, यो अमेरिकन छनौट प्रक्रियाको उस्तै नै होइन, र केहि नियमहरू भिन्न छन्।
उदाहरणका लागि, क्यानाडाहरू कम्तीमा 18 वर्षको उमेरमा र सुधारकारी संस्था वा क्यानाडामा एक संघीय पेन्टिमेन्टमा कैदीहरूलाई सङ्घीय चुनाव, बृद्धा र रेफन्डेन्टहरूमा विशेष मतदान गरेर मतदान गर्न सक्दछन्, उनीहरूले सेवा गरिरहेका छन्।
अमेरिकामा, फेलोनद्वारा मतदानले संघीय स्तरमा नियमन गरिएको छैन, र केवल दुई अमेरिकी राज्यहरूले भंग गर्ने मानिसहरूलाई अनुमति दिन अनुमति दिन्छ।
क्यानाडा एक बहुतायत मतदान प्रणाली प्रयोग गर्दछ, जुन प्रत्येक मतदाता प्रति कार्यालय एक उम्मेदवारको लागि मतदान गर्न अनुमति दिन्छ। अरू उम्मेदवार भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार चयन गरिएको छ, भले पनि उनले वा समग्र रूपमा मतदानको बहुमत नहुन सक्छ। क्यानाडाली संघीय चुनावमा, प्रत्येक जिल्लाले सदस्यलाई छनोट गर्दछ जसले यसलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
क्यानाडामा स्थानीय स्तरमा निर्वाचनका नियमहरू निर्वाचनको उद्देश्य अनुसार फरक फरक हुन सक्छ र यो कहाँ रहन्छ।
क्यानाडामा फेडरल वा प्रांतीय / क्षेत्रीय निर्वाचनमा मतदानको लागि केही नियमहरू र योग्यता आवश्यकताहरूको यहाँ यहाँ एक अवलोकन छ।
क्यानाडा संघीय निर्वाचनमा मतदान गर्न तपाईंले क्यानाडा नागरिकको हुनैपर्छ र चुनावको दिन 18 वर्ष वा पुरानो हुनुपर्दछ।
क्यानाडामा सबैभन्दा योग्य मतदाताहरूको नामहरू निर्वाचनका राष्ट्रिय दर्तामा देखा पर्नेछन्। यो विभिन्न संघीय र प्राविधिक स्रोतहरू बाट राखिएको आधारभूत जानकारीको डेटाबेस हो, क्यानाडा राजस्व एजेन्सी, प्राधिकरणहरू 'र क्षेत्रहरू' मोटर वाहन रजिष्टर्डहरू, र नागरिकता र आप्रवासन क्यानाडा विभाग।
क्यानेडियन संघीय चुनावका लागि मतदाताहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न इलेक्टर्सको राष्ट्रिय दर्ता यदि तपाइँ क्यानाडामा मतदान गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईं सूचीमा हुनुहुँदैन भने, तपाइँलाई सूचीमा प्राप्त गर्न वा अन्य योग्यता कागजातमार्फत तपाईंको योग्यताको प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
क्यानाडाका मुख्य निर्वाचन अधिकारी र सहायक प्रमुख निर्वाचन अधिकारीले निष्पक्षता कायम राख्न, क्यानाडाली संघीय चुनावमा मतदान गर्न अनुमति छैन।
यहाँ क्यानाडाली संघीय चुनावमा मतदान गर्न कसरी रजिस्टर गर्ने छ ।
क्यानाडा प्रांतीय चुनावमा मतदान
प्रायजसो क्यानाडा प्रान्तहरू र क्षेत्रहरूमा मात्र नागरिकहरूले मतदान गर्न सक्छन्। 20 औं शताब्दीको र प्रारम्भिक 21 औं शताब्दीसम्म, ब्रिटिश विषयहरू जुन नागरिक थिएनन् तर क्यानाडा प्रांत वा क्षेत्रमा बस्ने उनीहरूले प्राधिकरण / क्षेत्रीय तहमा चुनावमा मतदान गर्न योग्य थिए।
क्यानाडाको नागरिक बनेको, अधिकतर प्रान्तहरु र क्षेत्रहरु लाई मतदाताहरु लाई 18 वर्ष पुराना र निर्वाचन दिवस देखि छः छ महिना को लागि प्रांत या क्षेत्र को एक निवासी को आवश्यकता हो।
तथापि यी नियमहरूमा केही भिन्नताहरू छन्। उत्तरपश्चिमी क्षेत्रहरूमा, युकोन र नुनाउतमा, एक मतदाता छनौट गर्न एक दिनको लागि एक वर्षको लागि त्यहाँ बस्न पर्छ।
ओंटारियोमा, मतदान गर्नु भन्दा पहिले नागरिकलाई बाँच्न चाहिने कति लामो समयसम्म कुनै प्रतिबन्ध छैन, तर शरणार्थी, स्थायी निवासीहरू, र अस्थायी बासिन्दाहरू योग्य छैनन्।
नयाँ ब्रन्सविकले नागरिण गर्न योग्य प्राणीलाई 40 दिनका लागि त्यहाँ बस्न आवश्यक छ। न्यूफाउन्डल्याण्ड मतदाताहरूले मतदान (मतदान) दिन दिनको दिन प्राचिनमा बाँच्नका लागि प्राविधिक छनौटको लागि योग्य हुन। र नोवा स्कोटियामा, नागरिक चुनावमा छ महिना अघि6महिनाअघि त्यहाँ बस्नै पर्दछ।
सस्केचेवानमा, ब्रिटिश विषयहरू (यो क्यानाडामा बस्ने व्यक्ति हो तर अर्को बेलायतको राष्ट्रमंडलमा नागरिकता छ) अझै पनि नगरपालिकाको चुनावमा मतदान गर्न सक्छ। स्यास्चेवानको चुनावमा मतदान गर्न तुरुन्तै पात्र छन् र विद्यार्थीहरू र सैनिक कर्मचारीहरू चाँडै योग्य छन्।
क्यानाडामा थप जानकारीको लागि र यसको सरकार कसरी कार्य गर्दछ, क्यानाडाको सरकारी सेवाहरूको यो सूचकांक जाँच गर्नुहोस्।
क्यानाडामा राजधानी सतावटको उन्मूलन
क्यानाडाको प्रांतीय बर्ड एम्बम्म्स
क्यानेडामा संसदको संरचना के हो?
यूएस मा मास बटिंग मा तथ्य पाउनुहोस्
फ्रोजन सब्जिहरु माइक्रोवेव मा स्पार्क
शीर्ष 12 देश संगीत सिनेमाहरू
कुरान पढ्न शुरुवातको गाइड
नासाका अंकहरू कसरी प्राप्त गरिन्छ
कसरी मनोविज्ञान परिभाषित गर्दछ र देवता व्यवहार बताउँछ
Berbers - एक गहरी प्राचीन इतिहास संग उत्तरी अफ़्रीका Pastoralists
डेविस लस III
किन लिंकन एक घोषणा को निलंबित हबीस कार्पस को मुद्दा ले?
क्लासिक मोटरसाइकल तारिङ ट्यूटोरियल
लाभको लागि तल डगल गर्दै
कनेक्टिकट सिगार तंबाकू को भावना बनाउन
माइगेल डे क्रेभरेन्स, अग्रगामी नोभेलिस्ट
नाम3मोनोसकेचराइड्स
ब्रिटिश एमेन्सी च्याम्पियन
प्रिन्स आइल प्रवेशमा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय
Pocahontas छवि ग्यालरी
Invertebrates of 31 प्रकार
तुर्कमेनिस्तान | तथ्य र इतिहास